महंगो सावित भयो जुकरबर्गलाई आफैं फेसबुक स्टाटस ! गुमाउनु पर्यो ३.३ बिलियन डलर - pnpkhabar.com
You are at:Home»विश्व»महंगो सावित भयो जुकरबर्गलाई आफैं फेसबुक स्टाटस ! गुमाउनु पर्यो ३.३ बिलियन डलर
महंगो सावित भयो जुकरबर्गलाई आफैं फेसबुक स्टाटस ! गुमाउनु पर्यो ३.३ बिलियन डलर
By रिता घिसिंग on ३० पुष २०७४, आईतवार ०३:४३ विश्व
एजेन्सी : आफ्नो एउटा स्टाटसका कारण फेसबुकका सीईओ मार्क जुकरबर्गले ३.३ बिलियन गुमाउनु परेको छ । जुकरबर्गले व्यवसाय, ब्राण्ड र मिडियाका पोष्टलाई कम महत्व दिई न्यूज फिडमा परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेका थिए । त्यसको साटो पारिवारिक र साथीभाइबीचका कुराकानीलाई प्राथमिकता दिने जुकरबर्गले आफ्नो पेजमा लेखेका थिए ।
त्यही स्टाटसका कारण फेसबुकले ३.३ बिलियन डलर गुमाउनु परेको ब्लूमबर्ग न्यूजले जनाएको छ ।
वाल स्ट्रिटमा शुक्रबार मात्र फेसबुकको शेयर मूल्य ४.५ प्रतिशतले गिरावट आएको छ ।
जुकरबर्गले आफ्नो दिनको सुरुवात ७७.८ बिलियनको मालिकका रुपमा गरेका थिए तर, शेयर बजारमा आएको गिराबटका कारण ७४ बिलियनमा दिनको अन्त्य गरे ।
यससँगै जुकरबर्ग विश्वका अर्बपतिहरुको सूचीमा पनि एक स्थान तल झरेका छन् । उनलाई स्पेनिस अमानसियो ओर्टेगाले पछि पारेका छन् र चौथो स्थानमा उक्लिएका छन् ।
शुक्रबारको स्टक मार्केट बन्द हुँदा अमेजानका जेफ बेजोसको सम्पत्ति १०९ बिलियन डलर पुगेको फोब्र्सले जनाएको छ । नयाँ वर्ष सुरु भएपछि मात्र बेजोसको आन्दानीमा १० बिलियन थपिएको छ । यसको अर्थ दिनको एक बिलियन हुन्छ ।
उनी माइक्रोसफ्टका फाउण्डर बिल गेट्सलाई पछि पार्दै विश्वकै सबैभन्दा धनी बनेका छन् ।